by Ibraahin Yuusuf Axmed
Juun, juun, juun. Qofka bisha juun Iswiidhan soo galaa wuxuu moodayaa janno. Kaymuhu cagaaranaa! Dhirtu dhaadheeraa oo qurxoonaa! Dhulku doog iyo ubax badanaa! Maxaa balli iyo haro galac leh! Maxaa tog iyo webi meel walba qulqulaya! Magaaladu nadiifsanaa oo degganaa. Labaatanka bisha juun oo ay qorraxdu diirran tahay ayuu Rooble soo galay Iswiidhan. Wuxuu dalandalinayey qoyskiisa oo ka kooban xaaska Hodan iyo laba ilmood, Ismahaan oo lix jir ah iyo Axmed oo afar jir ah. Waa afartan jir miyi ku barbaaray tobankii sano ee u dambeeyeyna ahaa askari bilays ah. Riyadiisa ugu fog uguna weyni waxay ahayd mar uun in uu reerkiisa nolol ku filan u helo, mar uun in uu gaadho heer uusan cuntadooda, arradbeelkooda iyo hoygooda ka welwelin. Riyadiisa kale ee muhiimka ahi waa in uusan mijintiisa qaadka ah iyo sigaarka waayin. Toddobadii sano ee uu reerka lahaa arrimahaas wuxuu ku helayey silic iyo saxariir.
– Naa Ismahaan, waa maxay waxa aad gashan tahay? Ha ku bixin sidaas ee wax dhaama qaado.
– Waar Axmed, maxaa siliska iyo kuusha kuu xidhay ma dumar baad tahay? Isla yaab oo waxa iska bixi. Surwaalkan xun ee kaa dhacayana iska tuur oo wax ku la’eg gasho.
– Wuu i la’eg yahay? Haddii uu ku la’eg yahay muxuu kaaga dhacayaa?
– Bal wax uu ku hadlayo dhegaysta! Sidee loogu talogalay ma in uu kaa dhaco?
– Waar ma iga dhacayo lahaane waxa iska beddel dibna yaanan kuugu arkin. Timahan xun ee lagu moodo qof waalan iyagana galabta iska soo jar. Ma i maqlaysaa?
– Ismahaan, sow ma ogid waxa aad sheegaysid in ay diinta iyo dhaqanku diidayaan? Sow ma ogid in ay ceeb iyo sharafdarro inoo keenayso? Sow ma …
– Maya ee ma ogi, waxaanse og ahay faqrigu in uu ceeb iyo sharafdarro yahay. Bal arag nolosha aad raali ku tahay. Caydh baad ku nooshahay annagana nagu korisay, haddana shaqo lacag iyo magac lagu kasbado ayaad ceeb ku sheegaysaa.
– Haddii aan caydh idinku koriyey maxaan idinka hagraday? Dhulkeenna markii aynu joognay dhididkayga ayaan idinku quudin jiray ee dhulkan qalaad cid shaqo ii oggol ma aragtay? Waa maxay magaca qaawanaan laga kasbadaa? Noloshuse lacag uun ma aha ee sow in aynu wax kale xeerinno ma aha? Sow in aynu waxa uu qaddarku inoo qorsheeyey ku qanacno ma aha?
– Adigu haddii aad ku qanacsan tahay ku jir, laakiin anigu nolol xun oo aan ka bixi karo kuma qancayo.
Habar Iswiidhish ah oo albaabka kiisa ku beegan ku jirta ayaa daloolka ka eegtay, waxayna markiiba wacday bilayska iyada oo leh: ”Albaabkayga waxaa jiifa neygar sakhraansan ee kaalaya iga kaxeeya”. Laakiin ma ahayn neygar sakhraansan. Wuxuu ahaa nin soomaaliyeed oo ahaan jiray geeljir aad isula weyn, mar kalena ahaan jiray xiddigle bilays ah oo naftiisa u hanweyn. Wuxuu ahaa nin gumoobay oo ka mid ah ummad gumowday.
The views published here are solely those of its authors (Ibraahin Yuusuf Axmed) and do not necessarily reflect those of REDSEA-ONLINE.COM.